Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / In waalid la ahaado / Dugsi
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 19 5 2021
Fasalka dugsiga barbaarinta
Dugsiga hoose-dhexe waa waajib Swiidhan gudeheeda. Halkan carruurta oo dhan waxay dhigtaan sagaal sano. Badankoodu waxaa ay fasalka 1 billaabaan dayrta ay buuxinayaan 7 jir. Sannad dugsiyeed kasta waxaa uu ka koobanyahay laba xilli dugsiyeed, mid deyrta ah- iyo mid xilli dugsiyeed gu' ah.
Dugsiga sare ayaa ilmahaagu ka dhigan karaa barnaamijyada qaran ee kala duwan ama barnaamijyada hordhaca ah. Barnaamijyada qaranka waxaa ku jira barnaamijyo xirfadeed iyo barnaamijyada isu diyaarinta jaamicadda.
Si ilmahaagu u awoodo dhigashada barnaamij xirfadeed waxaa loo baahanyahay in ilmahaagu haysto shahaaddo baasitaan oo ku aaddan af Iswiidhishka ama af Iswiidhish oo luqad labaad ahaan ah, af Ingiriisi, xisaab iyo shan maaddo oo dheeraad ah. Micnhii waxaa loo baahanyahay shahaaddo baasitaan ah ku aaddan isu geyn siddeed maaddo.
Haddii ilmahaagu aanu geli karin barnaamijyada qaranka waxaa ilmuhu wax ka baran karaa mid ka mid ah afarta barnaamij ee hordhaca ah. Barnaamijyada hordhaca way dabacsan yihiin markay noqoto dhinaca xawaaraha waxbarasho, baaxadda iyo nuxurka. Barnaamijyadan waa inay xitaa yihiin kuwo la waafajiyo aqoonta ilmhaagu horey u haysatay iyo baahidaada.
Macalimiintu waa inay qiimeeyaan aqoonta ilmaha ee dhinaca maadooyinka kala duwan ee fasalka sii diyaarinta. Marka macalimiintu qiimeeyaan in ilmuhu ka soo bixi karo hal maado oo ah dhinaca fasalka
caadiga ah waa in ilmuhu ka qayb qaataa waxbarashada oo sidaas lagu baddelaa.
Dhinaca dugsiga hoose-dhexe waxaa ilmahaagu heli karaa waxbarashada maadada iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Caruurta swiidhishku aanu ahayn luqadooda hooyo waxay baran karaan iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah haddii ilmahani u baahanyahay tan. Waa maamulaha iskoolka qofka go'aaminaya haddii ilmo uu baranayo iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Waxaad la xiriiri kartaa maamulaha iskoolkan haddii ilmahaagu baahi u qabo dhigashada iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah.